Ọ bụla disk nke OS arụnyere na o nwere usoro dị ka nke usoro akpụkpọ ụkwụ os na onye ọrụ nwere ike na-amalite na-arụ ọrụ iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe results na-hụrụ na nke a. E nwere ọtụtụ mbipụta na-eduga na nsogbu nke ghara ịdị irè nkebi tebụl na maka otu ihe a na nkuzi e dere iji jide n'aka na onye ọrụ na-pacified na nke a. The yikarịrị akpata nwere ọtụtụ ma e nwere ihe ole na ole e nwere ike ịkọwa n'ụzọ zuru ezu na iji jide n'aka na onye ọrụ nwere ike agbake data ma ọ bụ nwere ike ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe pụta na-site na nke a na ikwu na nsogbu nke mere na ọ bụrụ na e otu okwu nke na-eme n'ọdịnihu ọ nwere ike ofu enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
Ihe na-eme ka nke
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na-metụtara nsogbu na ihe na-akpata ya:
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị zutere okwu na nke a na-eduga ná nsogbu. Mgbe usoro a na mechie na untraditional ụzọ mgbe ahụ naanị partitions na-emerụ. The ọzọ na-akpata nwere ike ịgụnye ahụ mebiri emebi ike mbanye si emeputa ọgwụgwụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ agbanweela a igbu n'ụdị ọ bụla. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na omume rụrụ arụ nke nkebi a na-enyocha.
Buut usoro nke
Ọ bụghị mgbe nile nkebi ure ma ọ bụ na buut usoro na-jijiji iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye njehie. Iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na ọrụ ga-buut usoro na pịa F8 isi iji hụ na buut menu na-enweta na si n'ebe ahụ siri ike mbanye bụ-ga-mkpa iji jide n'aka na mgbe ọ bụla ndị usoro a na malitere OS na n'elu si mbanye na usoro a na malitere na nke a.
Otú ndozi ghara ịdị irè nkebi table nsogbu
Iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe usoro na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ na e kwuru na nke a na-abụghị nanị soro ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi kasị mma pụta na bụ maa ihe a chọrọ na nke a. Mgbake gburugburu ebe obibi na e agbakwunyere n'ime onye ọ bụla OS na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nke kpebiri mbụ aka na-eme n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na njehie a na ihu ọzọ mgbe ahụ nakwa onye ọrụ nwere ike nweta ihe kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na nke a . Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ na a ga-kwuru na a akụkụ nke nkuzi na-soro na nke kacha mma n'ụzọ iji jide n'aka na onye ọrụ bụghị nanị na osịmde chọrọ pụta ma n'ozuzu nke a na-kpebiri ka anya dị ka usoro na-kwuru ebe a na-etinyere. Nzọụkwụ na na-aka na nke a nwere ike si dị iche na usoro ka usoro ma n'ozuzu ha bụ:
Ịrụzi na usoro mgbe booting na mgbake gburugburu ebe obibi.
Iji idozi atụmatụ iji jide n'aka na usoro faịlụ na-ofu.
Ịrụzi na nna ukwu buut ndekọ.
Ọ bụrụ na achọrọ mgbe ahụ ọkachamara ndụmọdụ na analysis na-iwere na nke a.
Zuru ezu usoro a ga-soro e kwuru ụzọ dị iche iche na URL http://www.selectrealsecurity.com/fix-windows-startup/ na ọ na-gwara iji jide n'aka na ihe ndị a na-eduzi na-gara na-arụpụta ihe kasị mma Otú ọ dị iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe usoro na e mewo ka mgbe jikọta n'elu abụọ a gara mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị ịnọgide na nkuzi na nke kacha mma na ọkaibe mkpebi na nke a.
Mgbe amalite usoro onye ọrụ pụrụ ịhụ idozi nhọrọ ma ọ bụrụ okwu a bụ nke ịbụ ihu ma ọ nwere ike-aka enweta site booting usoro na-anọgide na site na ịpị F8 isi rue ihuenyo egosi:
The idozi kọmputa gị nhọrọ bụ ga-ahọrọ iji jide n'aka na usoro Ọganihu n'ihu, onye ọrụ kwesịrị ka a mata ya na pịa Tinye gaba n'ihu:
The windows ga-amalite itinye faịlụ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri:
The usoro ndenye a ga-họọrọ na-esote button bụ na-enwe n'ihu n'ihu:
Onye ọrụ ugbu a kwesịrị iji nweta iwu ozugbo site na ịbanye na dị ka onye nlekọta:
The mmalite idozi ngwá ọrụ a ga-ahọrọ ime ka n'aka na mmalite mbipụta na-kwara na onye ọrụ Ọganihu n'ihu:
Usoro ga-ahụ na-amalite na-achọ mbipụta na nke a:
Usoro weghachi ebe bụ mgbe ahụ na-kere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a:
Imecha button bụ na-enwe n'ịkwado weghachi ebe:
Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Malitegharịa ekwentị button na-enwe iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu ofu na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe mkpebi na ike-etinyere na n'ọdịnihu nakwa ma ọ bụrụ na nke na-ebilite:
Ọ bụrụ na ihe bụ nsogbu abụghị ofu ọ na-gwara na-akọ njehie ka Microsoft ha ga-ele anya mgbe ọ na oké zuru ezu inye onye ọrụ na nfiksi:
Ihe na-elekọta mgbe gwara ndị ghara ịdị irè nkebi table
Iji mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri enweghị ihe ọ bụla n'ihu mmebi ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ ihe na-atụle:
The nna ukwu buut ndekọ ma ọ bụ usoro a ga-enyocha ji anya na-eme ka n'aka na ọrụ adịghị esi n'ime hassle nke na-esonụ ogologo usoro.
The data kwesịrị azụ elu-eme n'aka na ọnwụ mgbe etịbe na nke a na onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma.
E kere eke nke weghachi ebe kwesịrị mere na mbanye ọzọ karịa ndị nwere windows arụnyere na ya iji gbochie n'ihu mmebi.
Olee otú Naghachi ehichapụ Email na Outlook
> Resource> Naghachi> Olee idozi "ghara ịdị irè nkebi table" nsogbu